Amasu Okumaketha Okuphumelela Kakhulu we-B2B | Martech Zone
Amasu Wokukhangisa Okuqukethwe Okuphumelela Kakhulu
NgoLwesine, Novemba 6, 2014 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Sabelane Amabhentshimakhi wokukhangisa okuqukethwe kwe-B2015B ka-2, amaBhajethi namathrendi kanye ne amasu wokuthengisa wokuqukethwe athandwa kakhulu isetshenziswa ngabakhangisi be-B2B. Kepha yini amasu wokuthengisa wokuqukethwe we-B2B asebenza kakhulu?
Ngokwesifundo, imfihlo yokuphumelela kokumaketha okuqukethwe ukubhala isu lakho lokuqukethwe bese unamathela kulo. Kuphinde kwembula ukuthi abathengisi bokuqukethwe bakha okuqukethwe okwengeziwe kepha kusenzima ukuthola umkhondo we-ROI, ikakhulukazi uma bengabhali isu labo. Ungakwazi funda umbiko ogcwele ngakho konke okutholakele okuningiliziwe. UFrancois Matheiu, Uberflip
Okunye okuvelele esivumelana nakho futhi esikubonayo namakhasimende ethu:
Infographic ukusetshenziswa kukhuphuke kakhulu. DK New Media inenqwaba ishicilelwe futhi iningana isakhiwa ngamakhasimende ethu.
Imicimbi engaphakathi komuntu zisebenza ngokumangazayo, zilandelwa ngama-webinars namavidiyo.
LinkedIn iyaqhubeka nokuba ngumthombo osebenza kakhulu ekusetshenzisweni kwemithombo yezokuxhumana.
Ukudala, ukukhiqiza futhi ukulinganisa ukusebenza kokumaketha kokuqukethwe kuyaqhubeka kube yizinselelo eziphezulu.
Tags: b2b amabhulogiizifundo ze-b2bb2b okuqukethwe infographicukumaketha kokuqukethwe kwe-b2bimicimbi b2bi-b2b infographicb2b amavidiyo wokumakethab2b imithombo yezokuxhumanaamavidiyo b2bb2b ukusakazwa kwewebhub2b ama-webinarUkukhangisa Okuqukethweuberflip
Thola Okuqukethwe Kwakho Kushicilelwe Ngokushesha ngalezi Zeluleko Zokuphathwa Kwezithombe
Guqula ama-PDF wakho abe yiSelula, iWebhu ekulungele ukuSebenziseka, Nesibambekayo Esibambekayo
Nov 7, 2014 ngo-10: 03 AM
Siyabonga ngokwabelana nge-infographic ka-Uberflip, kuhlale kuyintokozo ukufaka i-Marketing TechBlog!